ESTA AMERICA KUFUNGA - USA US ESTA E-Filing Traveling Services
TARISAI ESTA STATUS
E-Faira PASSPORT Services
NYAYA YOKUTSVA ONA KUDZIDZA KUNYANYA
Unoda kubatsirwa kutanga?
Mvumo Yevatapi Vepasi Pose vanoda kuendesa kuUnited States pasi pePurogiramu yeVisa Waiver vanofanira kuisa chiremera.
Vagari Vanokodzera Kana Kuti Vagari Vemarudzi:
Iwe uri mugari wenyika kana kuti akakodzera nyika yeVisa Waiver Program yenyika.
Mafambiro ako ndeemazuva e90 kana pasi.
Unoronga kuenda kuUnited States kumabhizimisi kana kufara.
Iwe parizvino hauna mvumo yekuenda kune imwe mushanyi.
Ndeupi Mashoko Anodiwa:
Pasipoti inofanirwa kubva kuVisa Waiver Program yenyika
Kadhi kadhi rechikwereti (MasterCard, VISA, American Express, uye Tsvaga kubhadhara $ 89 pamutero wekushanda.
Mashoko ako ekukurukura. (Zita, Nhare Yenhare, Kero Yokutumira, uye Imeyili Inzvimbo)
Tsanangudzo uye ruzivo rwemashoko ekugara kwako.
ESTA application yakatsanangurwa
Chii chandinofanira kuisa kune ESTA?
Iwe uchada pasipoti yako nekadhi yekubhadhara kuti upe shanduro. Nzira yako yekufambisa inofanirwa kuisa asi inogona kuiswa. Ndapota fungai FAQ yedu yemibvunzo yakawanda uye mhinduro pamusoro pako ESTA chimiro
Mishonga yakagadzirirwa ESTA Application. ,
Mari Yese yeESTA inoshandiswa kuburikidza nekwereti kana kadhi yemari. Hurumende yeUnited States haisi kunze kwekuongorora kana mari yemirairo yeEstA application, uye inoisiya kune makambani akadai seESTAmerica.org kubatsira ne "Electronic System for Travel Authorization"Nzira. Tinobvuma zvose mabhii makuru emakadhi. Ndapota taura nesu kana iwe usingakwanisi kubhadhara nekadhi rechikwereti, asi nzira iri nyore ndeye chikwereti kana kadi yebhadharo.
Chengetedza ESTA yako yekushanda
Unoda kugadzirisa, kuongorora, kana kuvandudza ESTA yako?
Pane mimwe minda iyo inogona kuongororwa muESTA mushure mokunge mawana gwaro rinotenderwa kufamba. Iwe unonyatsokurudzirwa kuti uongorore zvakanaka ESTA yako mberi kwekufamba kwako kuenda kuUnited States kuti uzvipe nguva iwe kana pane iko kukanganisa nekunyorera kwako. Kana iwe uine mubvunzo upi neupi pamusoro pako Kuendesa, tapota tumira e-mail nesu.
Ive Visa uye ESTA chinhu chakafanana here?
IESTA mvumo haisi visa. Iko kusati kwasununguka kuenda pasi peVWP, iyo yakagadzirirwa kubvumira vafambi kuti vapfuure kupedza visa nguva inopedza nguva. The ESTA mvumo hazvina kufanana neUnited States visa nenzira ipi zvayo, uye haigone kuiswa panzvimbo yevisa mumamiriro ezvinhu apo visa yekufamba inotarisirwa. Iwe haudi ESTA kana iwe uine visa yakakodzera.
ESTA uye VWP Information
ESTA maitiro anongowanikwa paIndaneti chete.
Zvinonyanya kukosha zvido zvekushandisa zvinosanganisira pasipoti uye mashoko ekubhadhara. Nzira yako yekufambisa inosarudza uye inogona kuongororwa gare gare. Zvose zvinoremekedzwa minda zvinofanira kuzadzirwa uye zvakapedzwa zvakanaka. IUnited States haina kutora cheke kana mari yemirairo yeEstA yekushanda. Yakasara kumakambani akadai eESTAmerica.org kubatsira nekubatsira vagari venyika yako kuzodza fomu nenzira yakarurama.
Ndiani Anoda Kushandisa ESTA?
Munhu wose anopinda muUnited States pasi peVisa Waiver Program. Izvi zvinobvumira Dhipatimendi reHomeland Security kuti isati yatendera Visa Waiver Vafambi vasati vabva munyika dzavo. Sarudza chete nyika dziri Visa Waiver Countries, uye iwe uchawana runyora pasi peThe (VWC) peji.
Itsva ESTA Application
Vose vanofamba kubva kuVisa Waiver nyika vanofanirwa kushandisa
ESTA inogona kuwanika paIndaneti chete
Zvinotora zvishoma kudarika maminitsi e10 kuti apedzise shanduro
Maawa 72 kushandura nguva kana zvishoma
Ongorora ESTA Application
Rongedza iyo kero yekugara muUnited States
Dzorerai email yekero inoshandiswa muESTA yako yekushandisa
Vhura Esta Application
Dzokororai zuva rako rekupedzisira kweESTA
Edzai ESTA yako yekushandurwa kwezvinhu zvakanaka mberi kwekufamba
Dzokorora zvido zvako zvepasipoti
Rongedza chero chero dhidhi rekushandira, kana zvichidikanwa
24 / 7 Customer Support. Taura neHupenyu Hwokufambisa Mutsigiri Nhasi.
Kana Kushandisa Kwako Kushanda Isingagamuchirwi, Tinopa 100% Money Back Guarantee.
Ndiani Anobvumirwa Kufamba MuUnited States?
Kushanyira Vadiwa, kana kuuya kuzororo muUnited States? Iwe unofanira kuwana kodzero yakakodzera kubva kuHurumende yeUnited States usati wapinda munyika. Zvimwe zviitiko, izvi zvinoreva kushandira vhiza asi kana iwe uri mugari wenyika iyo inowanikwa muVisa Waiver Program (VWP), uchishandisa Electronic System yekutendera Kuendesa (ESTA) ingave iri nyore uye yakakurumidza kusarudzwa. VWP inobvumira vagari venyika ye38 kuti vawane mvumo yekufambisa kuUnited States kuburikidza neDhipatimendi reMunyika yekuchengetedzwa kweUnited States pasina kuwana visa passport. Kana iwe uri iye zvino uri mugari wemunyika inobatanidzwa uye une pasipoti yakakodzera, unongoda kushandisa neefomu ye ESTA. Kana iwe uchikodzera, uchave nemvumo yekufamba mukati meUnited States kwemazuva 90. Kana iwe uchifamba uchienda kuUnited States uchienda kune imwe nyika, iwe uchiri kudikanwa kuisa shanduro ye ESTA.
Electronic Visa Application Vs. ESTA Application.
ESTA zvinodiwa pasi pe (VWP) Visa Waiver Program yakanyanya kudzvinyirira kupfuura yevasiri vashandi vekushandira vasa electronic. Kushanda kweVisa kunoda kweawa rimwe chete kana kupfuura nguva yekuzadza zvose zvekufamba uye nhoroondo yezvakaitika pamusoro pako. Vs. iyo ESTA inoshandiswa inenge maminitsi 10.
Mafambiro Okufambisa Paunenge Uchishanda Kune ESTA
Paunenge uchikumbira ESTA, inoshandiswa pakuona vadikanwa, nguva yekuzorodha, vanachiremba vanoshanyira, uye vakakodzera maitiro akawanda ebhizimisi kuenda kuUnited States of America. Zvimwe zvinangwa zvekufamba zvinogamuchirwa, asi imwe inoda kushanda kweVisa yakazara.
Tourism, Kambi, uye Site Kuona
Zvikurudziro Park Park
Kushanyira vadiwa kana shamwari
Makoroji ekushanyira vasati vakumbira Visa kuti vauye
Kurapwa uye Chiremba anoshanyira
Zviitiko zvezvemagariro, maContsti, kana kuti mapoka ezvibasa zveboka remasangano
Kubatanidzwa mumitambo, mimhanzi, mitambo, kana chero imwe yakadaro yemakwikwi kana zviitiko, (Hazvikwanisi kubhadharwa kutora)!
Kurairwa kwebhizimisi uye misangano yebhizimisi
Kubatanidzwa mune imwe dzidzo, musangano wedzidzo, kana chero rudzi rwegungano. Muenzaniso Comic Con
Nenguva pfupi yekudzidzira basa (Haikwanisi kubhadharwa nemhando ipi zvayo muU.SA kunze kwemari inowanikwa kuti iwe ugare)!
Zvidzidzo zveVisa zvinotarisirwa kuenda kuUnited States of America kana:
Yakazara- Nguva Yebasa
Yakareba -Madziro Edzidzo, Chikoro, kana Technical College
Chero mutori wenhau wekune dzimwe nyika, press, firimu, redhiyo kana zvimwe zvemashoko
Kutsvaga kugara kwechigarire muUnited States of America
Iwe Unoda ESTA Nekufambisa neUnited States?
Kana munhu asiri weAmerica ari kupfuura pakarepo nekuenderera mberi transit through ari nyika dzakabatana, iye / iye angada kutendera kufamba kwakakodzera C-1 visa, kunze kwekuti iye ari mugari wenyika ine chibvumirano na nyika dzakabatana kubvumira vagari vemo kuti vaende kune nyika dzakabatana pasina a vhiza .
Ndinoda visa yekubatanidza ndege in USA here?
United States Dhipatimendi reHumeland Security inoda vhiza Waiver Program (VWP) vafambi kuti vawane mvumo kubva kuna Electronic System for Travel Authorization (ESTA) maawa mashoma 72 vasati vapinda nokuti kutiza kuU.S. kana kushamwaridzana neUnited States ESTA inodiwa.
Ndinoda visa here kana ndine dambudziko reku USA?
Nenguva isipi uye inoenderera mberi zvinoreva kuti nzira yako yekuenda kwako yekupedzisira inosanganisira a layover muUnited States uye iwe unofanira kumira ipapo, asi hauna dzimwe ropafadzo. ... Zvisinei, kana iwe uine B-1 kana B-2 visa yeU.S., uye iwe unofanira kutamira munyika yose, haufaniri C visa.
Ndeipi Idzi Nyika Inoda ESTA E-Passports For USA?
Vashanyi vanogona kugara kwemazuva 90 muUnited States iyo zvakare inosanganisira nguva yakashandiswa kuCanada, Mexico, Bermuda, kana kuti zvitsuwa zviri muCaribbean kana kusvika kwaive kuburikidza neUnited States. IESTA inoda kana ikauya nemhepo kana kuti ngarava. Visa Waiver inoshanda pasina ESTA nyika inopinda muganhu, asi VWP haisi kushanda zvachose (kureva kuti visa inotarisirwa) kana mutasviki achiuya nemhepo kana gungwa kune munhu asingatenderwi.
Kubva 2016, the visa waiver haiiti mumamiriro ezvinhu apo munhu aimbova vakaenda kuIran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, kana Yemen kana kana mushure meChitatu 1, 2011 kana kune avo vari vaviri vagari veIran, Iraq, Sudan kana Syria. Zvimwe zvikamu zvakadai semapurisa, mauto, vatapi venhau, vashandi vebatsiri kana mabhizinesi ezvakanaka vanogona kunge vaine visa yavo inodzingwa neMunyori weHomeland Security.
Yakasarudzwa & Roadmap Countries.
Nyika dzakasarudzwa nokuda kwechigaro muHurumende yeVisa Waiver iri pakati pe "mapuraneti emugwagwa" uye kukodzera kubatanidzwa. Kusarudzwa kunotanga tsanangudzo yakajeka ne United States Department of Homeland Security yenyika yakasarudzwa yekuchengetedzeka kwemunharaunda uye kutamira kune dzimwe nyika. Hapana imwe nguva yakagadziriswa yenguva yakareba nyika inogona kuramba yakasarudzwa sei pakusarudzwa kwevanhu vasati vabvumirwa kana kurambwa kubva purogiramu.
Kubva 2005, Dhipatimendi reUnited States rave richiita hurukuro nenyika dzinonzi "mapaundi emugwagwa nyika," iyo inofarira kujoinha (kana kupindazve) VWP. Kubva munyika yekutanga ye19, 10 yakabvumirwa kuVWP.
Mvumo yevisa waiver inogona kubviswa chero nguva. Izvi zvinogona kuitika kana United States inofunga kuti vagari vemunyika mimwe vangave vakakwanisa kupfuura kare kuti vasaite zvigaro zvavo zveVWP, sekushanda pasina chibvumirano kana kupedza nguva yavo yekubvumirwa yekugara muUnited States. Saizvozvowo, Argentinakusabatanidzwa muVWP kwakagumiswa muC2002 zvichienderana nematambudziko emari ari kuitika munyika iyoyo uye zvinogona kuita kuti vanhu vaende kune dzimwe nyika uye kusagadziriswa kwemutemo kwevagari vayo muUnited States nenzira yeVWP. Uruguaykubatanidzwa mune purogiramu kwakabviswa mu 2003 nekuda kwezvikonzero zvakafanana. Nepo hukama hwezvematongerwe enyika nehupfumi husingatauri zvakananga kuti hunokodzera, inowanzotendwa kuti vagari venyika dzezvematongerwe enyika uye vakagadzikana mune zvematongerwe enyika havazove nevanokurudzira zvikuru kutsvaga basa nekusavhiringidza visa yavo kana vari muU.S., njodzi iyo consul inonyanya kukosha inofunga nezvekubvuma kana kuramba visa. Izirayeri hazvina kuiswa muVWP zvichiti chikamu pamusana pekutsvakurudza kwayo kwakasimba VaPalestina America vanoenda kuIsrael, nokudaro kwete kuzadzisa zvinotarisirwa.
The European Union yakamanikidza United States kuti iwedzere Visa Waiver Program kune dzimwe nhengo dzishanu dzasara dzisati dziri mairi: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland, uye Romaniya. Zvose izvi "mapaundi emigwagwa" kunze kwe Kiroshiya, iyo ichangobva kubatana neUnited States mu2013. MunaNovember 2014 the Hurumende yeBulgaria kuzivisa hazvizobvumirano neTransatlantic Trade and Investment Partnership kunze kwekuti United States yakasvisa vasasiti vayo vagari vayo.
Vagari veEurope Vanoda Visa KuU.SA?
Vagari vomuBritish kufamba pane zvakajeka, mumwe wemichina inogona kuverengwa kana e-pasipoti, nekudzoka kana yetikiti, uye ndiani ari kugara kwemazuva mashoma kwe90, akafanirwa Visa Waiver Program uye anogona travel visa-asina chete an Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
Ko veNyika vemuUnited States Vanoda EU visa kupinda muEurope? Vagari vemuUnited States vane pasipoti yakakodzera yeUnited States vanogona kuenda 26 European member member yeSchengen Area kwemazuva akawanda e90 pasina kushanda kana kuwana Schengen visa kwekushanyirwa kwenguva pfupi kana bhizimisi rwendo.
Kushanyira Vadiwa, kana kuuya kuzororo muUnited States? Iwe unofanira kuwana kodzero yakakodzera kubva kuHurumende yeUnited States usati wapinda munyika. Zvimwe zviitiko, izvi zvinoreva kushanda kwevisa asi kana iwe uri mugari wenyika iyo inowanikwa mune Visa Waiver Program (VWP), achishandisa Electronic System for Travel Authorization (ESTA) inogona kunge iri nyore uye yakakurumidza kusarudza.
Iko ESTA Inobvumirana Nezviitiko Zvakawanda Here?
Your IZVI mvumo inowanzo inobatsira pakufamba kakawanda pamusoro pemakore maviri (kutanga musi wawakabvumirwa) kana kusvikira pasipoti yako ipera, chero inosvika pakutanga *. Izvi zvinoreva kuti chero bedzi iwe wakagamuchira IZVI chiremera che famba, haufaniri kudzokorora panguva iyo kuvimbika nguva. ESTA zvinodiwa pasi pe (VWP) Visa Waiver Program yakanyanya kudzvinyirira kupfuura yevasiri vashandi vekushandira vasa electronic. Chikumbiro cheVisa chinodikanwa neawa rimwe chete kana kupfuura nguva yekuzadza zvose zvekufamba uye nhoroondo yezvakaitika pamusoro pako uye unofanira kumirira mwedzi isati yatenderwa. Vs. the ESTA application inenge maminitsi 10.
ESTA Inobhadhara Zvii?
Nokushandisa kwekuongorora kwedu uye kushandiswa kwepa $ 89.00 USD. Mari yacho inosanganisira mari yehurumende yeUnited States ye $ 14 (anenge £ 9) nemunhu mumwe nomumwe, uye inofanira kubhadharwa nekadhi rechikwereti. Kana sarudzo yako yakarambwa, inongoda mari $ 4 chete. (iyo inotsanangurwa muTrans Promotion Act, 2009)
Chii Chinoitika Kana ESTA Yako Ichitsvaga?
Kana mufambi akarambwa ESTA mvumo uye mamiriro ake ezvinhu haasati achinja, chigadziro chitsva chicharehwa zvakare. Mumwe mufambi asingafananidzi ESTA haafaniri kuenda kune imwe nyika pasi peVisa Waiver Program uye inofanira kushandiswa kune visa risingaiti mumiriri kune a US Embassy kana Consulate.
Zvinotora Nguva Yakadini Kuti Uwane ESTA?
An ESTA yekushandisa inenge (10) fomu yemaminiti gumi uye inoshandiswa pakarepo paIndaneti. Ruzhinji rwezvinyorwa runobvumirwa mukati memaminiti ekutumira. Zvisinei, kune zviitiko apo chisarudzo chekushanda chinogona kuchetwa kusvika 72 maawa. Ndicho chikonzero kuva nepurogiramu yekudzokorora chikumbiro chako ndiyo tsika yakanakisisa. Zvose zvinyorwa zvinowanikwa kubhadhara kadhi rechikwereti. ESTAmerica inogona kutora zvimwe kubhadhara sarudzo iyo United States of America haiti kunze.
Tanga basa rako Nhasi
Tanga Mafambiro ako mumaawa e72
Isu tinokurumidza kukurumidza uye nyore nyore US E-File ESTA Passport application. Ngatitorei E-filing system sangano rako kuburikidza nemibvunzo inodiwa uye timu yedu ichadzokorora zvaunoshandisa usati wazvitumira kuUnited States Customs Department. ESTAmerica inyoresa kambani mukati meUnited States.
Gara uri muchikwata apo pane zvinyorwa zve ESTA mitemo, Tinotumira emails kuti tikuudzei nezve nyika uye Visa Waiver Program.
Vakachengeteka uye vakavimbiswa E-Filing Payment Systems
ESTAmerica isangano rechitatu rekufambisa rine 24 / 7 mutengi wevhisi.
Hatisi hurumende yeUnited States kana Border Customs Agents.